:: My Little World ::: Collection of 2008 Thingyan Photos
Collection of 2008 Thingyan Photos
အခုရက်ပိုင်း သင်္ကြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို လိုက်ရှာကြည့်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည် ပြန်ပြီး သင်္ကြန်ပွဲကို ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့် မရှိတဲ့ အခါကြတော့ သူများတွေ တင်ပေးထားတဲ့ သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီးပဲ အလွမ်းဖြေရတာပေါ့။ ပုံတွေကြည့်ရင်း ကိုယ်တွေ ကြုံဖူးတဲ့ သင်္ကြန်တွေနဲ့အခုခေတ်သင်္ကြန် ဘာတွေ ကွာသွားတယ်၊ ဘာတွေ ဘယ်လောက်တောင် ပြောင်းလဲသွားတယ် ဆိုတာကိုလည်း ခန့် မှန်းကြည့်နေမိတယ်...
ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့ပိုစ့်တွေထဲမှာ ကိုရဲလွင်ဦး ဘလော့မှာ ရေးထားတဲ့ သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပိုစ့်တွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို သဘောကျ နှစ်သက်မိတယ်။ အလုပ်က နိုင်ငံခြားသား သူငယ်ချင်းတွေ မြန်မာနှစ်ကူးပွဲတော် အကြောင်းလာမေးတာနဲ့အဲ့ဒီလင့်တွေကို ပေးပြီး ကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။
[Home] YeLwinOo's PhotoBlog မှ သင်္ကြန် အကြောင်းပိုစ့်များ နှင့် ဓာတ်ပုံများ
PaDauk Pann- Inya Road - 2008 Fashion (14th April 2008)
Thingyan Yay (New Year Water)
[Home] Ko MyoThan ရဲ့ Picasa Web Album မှ ရန်ကုန် သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံများ
၂၀၀၈ သင်္ကြန် အကြိုနေ့ဓာတ်ပုံများ (၅၄ ပုံ)
၂၀၀၈ သင်္ကြန် ပထမ အကြတ်နေ့ဓာတ်ပုံများ (၃၅ ပုံ)
၂၀၀၈ သင်္ကြန် အတက်နေ့ (၅၆ ပုံ) ***New***
[Home] MMThingyan.com မှ သင်္ကြန် ဓာတ်ပုံများ
ရန်ကုန် (ရန်ကင်း၊ ရွှေဂုံတိုင်) အကြတ်နေ့ သင်္ကြန်
[Home] ThaKhinGyi.com မှ သင်္ကြန် ဓာတ်ပုံများ
ချင်းမိုင် သင်္ကြန် ဓာတ်ပုံများ
[Home] NativeMyanmar Forum မှ BaganNat မျှဝေသော မန္တလေးသင်္ကြန်ဓာတ်ပုံများ
Mandalay News & Gossip ( ဓာတ်ပုံတွေကို နေ့ စဉ် တင်ပေးနေပြီး ၀င်ကြည့်မယ်ဆို Member ၀င်ဖို့လိုပါတယ်)
[Home] BaganNat ရဲ့ ဘလော့မှာ တင်ပေးထားတဲ့ မန္တလေးသင်္ကြန်ပုံတွေ (နေးတစ်ဖိုရမ်မှာ တင်ပေးတဲ့ ပုံတွေနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဘလော့မှာကြတော့ တစ်စုတစ်စည်းထဲ ကြည့်ရတာ ပိုလွယ်တယ်။) ***New***
မန္တလေးသင်္ကြန် ပထမနေ့ 
မန္တလေးသင်္ကြန် ဒုတိယနေ့ 
မန္တလေးသင်္ကြန် တတိယနေ့ 
မန္တလေးသင်္ကြန် စတ္ထုနေ့ 
[Home] Picasa မှာ တင်ထားတဲ့ သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Album တစ်ခု (တောင်ကြီးမှာရိုက်ထားတာ နဲ့ တူတယ်)
[Home] တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ မှ တောင်ကြီး သင်္ကြန်
တောင်ကြီးသင်္ကြန် သတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံများ
[Home] အေးစေ မာတီပလိုင်းမှ သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံများ ***New*** Credit to mmhan
သင်္ကြန် ဒုတိယ အကြတ်နေ့(15-04-08)
MediafaxFoto မှ သင်္ကြန် ဓာတ်ပုံများ ***New*** Credit to mmhan
MEDIAFAX Foto » Myanmar-Politics-Festival
[Home] Tayzar ရဲ့ Picasa Web Album မှ ရန်ကုန် သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံများ ***New*** Credit to mmhan
Myanmar New Year Thin Gyan 2008 (15 Photos)
[Home] StevenAlexand's Blog မှ စင်ကာပူ သင်္ကြန်ပုံများ ***New*** Credit to Steven
2008 Singapore Thingyan's Photos
[Home] ပေါ်ပြူလာ ဂျာနယ်မှ သင်္ကြန် ဓာတ်ပုံများ
ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝန် သင်္ကြန် မဏ္ဏာပ်ဖွင့်ပွဲ - ၁
ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝန် သင်္ကြန် မဏ္ဏာပ်ဖွင့်ပွဲ - ၂
ရန်ကုန် မဟာသင်္ကြန် ၁၂ ရက်နေ့ နှင့် ၁၃ ရက်နေ့(အကြိုနေ့ ) ဓာတ်ပုံများ
ရန်ကုန် မဟာသင်္ကြန် ၁၂ ရက်နေ့ နှင့် ၁၃ ရက်နေ့(အကြိုနေ့ ) ဓာတ်ပုံများ - ၁
ရန်ကုန် မဟာသင်္ကြန် ၁၂ ရက်နေ့ နှင့် ၁၃ ရက်နေ့(အကြိုနေ့ ) ဓာတ်ပုံများ - ၂
ရန်ကုန် မဟာသင်္ကြန် အကျနေ့ဓာတ်ပုံများ - ၁
ရန်ကုန် မဟာသင်္ကြန် အကျနေ့ဓာတ်ပုံများ - ၂
ရန်ကုန် မဟာသင်္ကြန် အကျနေ့ဓာတ်ပုံများ - ၃
မန္တလေး မဟာသင်္ကြန် အကြို နေ့နှင့် အကျနေ့ဓာတ်ပုံများ
ရန်ကုန် မဟာသင်္ကြန် ပထမ အကြတ်နေ့ဓာတ်ပုံများ - ၁
ရန်ကုန် မဟာသင်္ကြန် ပထမ အကြတ်နေ့ဓာတ်ပုံများ - ၂
ရန်ကုန် မဟာသင်္ကြန် ဒုတိယ အကြတ်နေ့ဓာတ်ပုံများ - ၁
ရန်ကုန် မဟာသင်္ကြန် ဒုတိယ အကြတ်နေ့ဓာတ်ပုံများ - ၂
2008 Celebrity ThinGyan
ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝန် မဏ္ဏာပ်ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနား ***New***
ကျွန်မ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ သင်္ကြန်ပွဲတော်နဲ့ဓာတ်ပုံတွေ အကုန်ပါပဲ။ နောက်ထပ် ဓာတ်ပုံတွေ Links အသစ်တွေ တွေ့ ရင် Update လုပ်ပါအုံးမယ်။ တခြား သိတာများရှိရင်လည်း မျှဝေဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ Links တွေ ပို့ ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို မျှဝေသူများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း....
Posted by Nay Nay Naing at 4/16/2008 02:42:00 PM
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
Thursday, April 17, 2008 12:28:00 AM
မနေနေနိုင်ရေ... လင့်ခ်တွေအတွက် ကျေးဇူးပဲ။ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။
Thursday, April 17, 2008 9:50:00 AM
Thanks for the links sis.
I've found some other photos too. Havealook.
Friday, April 18, 2008 12:33:00 AM
ပီတိ၊ မျိုးကျော်ထွန်း၊ mmhan >> ဆုတောင်းတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။
Bro mmhan.. ဓာတ်ပုံလင့်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပိုစ့်မှာ ထပ်ထည့်လိုက်မယ်။ :-)
Friday, April 18, 2008 11:16:00 AM
Sure no prob. =)
Friday, April 18, 2008 11:33:00 AM
ပုံ link တွေအတွက် ကျေးဇူး ပါပဲ နေနေရေ
Friday, April 18, 2008 5:36:00 PM
Saturday, April 19, 2008 12:56:00 PM
MMHan နဲ့ Steven .. ဓာတ်ပုံ Links တွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :)
Saturday, April 19, 2008 8:48:00 PM
သင်္ကြန်ပုံရိပ်တွေ တွေ့ရတာ လွမ်းစရာပါဗျာ။
Sunday, April 20, 2008 12:08:00 AM
Happy 31st Anniversary!!
27 April 2008 @ Myanmar Embassy
ငယ်ချစ်ဦး - စိုင်းထီးဆိုင်
South Park Comedy Series : Watch Online Free
Can anyone fix the bug in this code?
Geek and Poke : IT Cartoons
အိပ်မရသော ညများစွာ သို့ .....
မြန်မာ နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့ 
သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁
SeaFood @ Pasir Panjang Hawker Centre
2nd Present for year 2008
Server room ...
ဂျူး - ကံကြမ္မာကို မယုံကြည်ကြသူများ
T.G.T.I.F (or) T.G.T.F
MyanmarNetworkNews (Free eBooks for all Myanmar)
WinterBells and Crossing - Orisinal